IXiaomi Black Shark izakwaziswa ngoNovemba 16 eYurophu | I-Androidsis
IXiaomi Black Shark sele inomhla wokumiliselwa eYurophu
UEder Ferreño | | Xiaomi
UXiaomi yenye yeempawu eziye zangena kwicandelo lokudlala le-smartphone. Uphawu lwaseTshayina luyenzile kunye ne-Black Shark yayo, yona yanikezelwa ngokusesikweni ku-Epreli odlulileyo. Ukongeza, kwiiveki nje ezimbalwa ezidlulileyo umvelisi othandwayo wazisa isixhobo sakhe esitsha secandelo lokudlala, uguquko kwifowuni yokuqala, neyasungulwa phantsi kwegama likaBlack Shark Helo, besele sithethile.
Ngoku, uphawu lubhengeza ukumiliselwa kwe-Black Shark yaseYurophu. Emva kokuboniswa ngo-Epreli, kuzo zonke ezi nyanga bekucingelwa ukuba ngekhe kuphehlelelwe ngaphandle kwe China. Kodwa ukumiliselwa kwayo kuqinisekisiwe, okuza kwenzeka kule nyanga.
Ngapha koko, kwisithuba esingaphantsi kweveki siya kuba nakho ukwenza ngale fowuni. Kuba uXiaomi uqobo uyakuqinisekisa oko Iya kuphehlelelwa kwintengiso kumazwe angama-28 aseYurophu nge-16 kaNovemba. Kwaye phakathi kwala mazwe sifumana iSpain. Iindaba ezimnandi kwabo banomdla kwifowuni yemidlalo yohlobo.
Amazwe apho uya kuba nakho ukuthenga khona ifowuni ukusukela nge-16 kaNovemba: IAustria, iBelgium, iBulgaria, iCroatia, iSipro, iRiphabhlikhi yaseCzech, iDenmark, iSlovakia, iSlovenia, iSpain, i-Estonia, iFinland, iFransi, iJamani, iGrisi, i-Hungary, i-Ireland, i-Itali, iLatvia, iLithuania, iLuxania, iMalta, iNetherlands, iPoland, IPortugal, iunited Kingdom, iRomania neSweden.
Nge-16 kaNovemba siza kuba nakho ukuyithenga, ngexabiso elingekaqinisekiswa. Kubonakala ngathi iifowuni ezimbini ezikolu luhlu lwe-Black Shark ziya kuphehlelelwa, kodwa ayisiyonto uthethe ngayo ngokucacileyo uphawu. Ke kuyakufuneka silinde de kube nguLwesihlanu ukufumanisa ngokusemthethweni.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ifowuni enokuthi abasebenzisi bayithande kakhulu. Yintoni egqithisile, kuthathelwa ingqalelo amaxabiso aqhelekileyo eXiaomi, le Black Shark iya kubiza ngaphantsi kweemodeli ezininzi kweli candelo. Ucinga ntoni malunga nokuqaliswa kwayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » IXiaomi Black Shark sele inomhla wokumiliselwa eYurophu
IiKnights & Dungeons sisenzo seMtyholi i-RPG enamanqanaba abanzi kwaye ininzi yokwenza